China Fish Collagen Peptide ifektri kanye nabaphakeli | IGelken
Amaphesenti angama-84 wabathengi akhombise ukukhetha okucacile kwe- ama-peptide ezinhlanzi ze-collagen, kanti amaphesenti angama-51 abo ayezimisele ukukhokha inani eliphakeme lale mikhiqizo. Ama-peptide ezinhlanzi ze-gelatin inethuba elihle lokufaka isicelo ekusetshenzisweni kokudla. Ingasetshenziswa njenge-ejenti yokuqina kokudla, i-emulsifier, i-ejenti egwebu, i-ejenti yokucacisainhlanzi i-gelatin peptide unendawo encibilika ephansi, uncibilike ngokushesha emlonyeni bese ukhipha ukunambitheka okwengeziwe.
Ulwandle luqukethe cishe ama-80% we-biomass yomhlaba, kufaka phakathi uwoyela wezinhlanzi, usawoti wasolwandle, izimila zasolwandle, iprotheni ye-fish collagen nokunye okondlayo, okwelapha nokusebenza okuluhlaza. Uma kubhekwa impendulo yemakethe, i-84% yabathengi ikhombise ukukhetha okucacile kwe-ama-peptide ezinhlanzi ze-collagen, futhi ama-51% abo babezimisele ukukhokha inani eliphakeme lale mikhiqizo. Impendulo enhle evela kubathengi ikhombisa ithuba elikhulu elingaba khona emakethe ephezulu.
Sisekela amakhasimende ethu emkhakheni wokuncintisana wobuhle nomkhakha wezengezo wokudla ngokukhiqiza ikhwalithi ama-peptide ezinhlanzi ze-collagen ukubasiza ukuhlangabezana nezidingo zabathengi nezimakethe eziguqukayo njalo.
Ngokusebenzisa ubuchwepheshe bethu obuhamba phambili emhlabeni, amanani we-premium brand kanye nokusekelwa kontanga, imikhiqizo ingaqhubeka nokuthuthukisa imikhiqizo yayo futhi ilethe imikhiqizo ehamba phambili embonini ukuthi imakethe ngokushesha ehlangabezana nezindinganiso eziphakeme kakhulu zemvelo, zokuziphatha nezekhwalithi.
Ubuningi bobufakazi besayensi buveze ukuthi ukudla nsuku zonke kwama-collagen peptides kukhuthaza ukukhiqizwa kwe-collagen ne-hyaluronic acid emzimbeni, okusiza ukuthuthukisa ukuqina kwesikhumba, ubushelelezi nokugcinwa komswakama wangaphakathi, ngenkathi ngasikhathi sinye kuncipha izimbotshana.
Ukuthengiswa kwe- new ama-peptide ezinhlanzi ze-collagen kusuka ezinhlanzini zasolwandle ezibanjwe zasendle kukhuphuke ngama-70% phakathi kuka-2018 no-2019.
"Izinga eliphakeme" le- ama-peptide ezinhlanzi ze-collagen kusuka kuzinhlanzi zasolwandle kanye nokuphishekela indlela yokuphila esimeme nenempilo kubangela ukufunwa kwale mikhiqizo.
Langaphambilini Inhlanzi Collagen
Olandelayo: I-Collagen ene-Hydrolyzed